Ilay mpandresy amin'ny fitantanana tetik'asa masoivoho: Brightpod | Martech Zone
Talata, Oktobra 1, 2013 Douglas Karr
Tsy misy tsy fahampiana rindrambaiko fitantanana tetikasa eny an-tsena - ary zavatra tsara izany. Io dia ahafahan'ny orinasa tsirairay mizaha toetra ny fizotrany anatiny sy ireo sehatra hafa misy PMS hahitana raha mety na tsia. Ny orinasa dia tsy tokony hanova ny fizotrany amin'ny PMS, ny PMS dia tokony hifanaraka amin'ny dingana. Nanoratra momba ny fahasosorako aho Rafitra fitantanana tetikasa taloha… ny ankamaroan'izy ireo dia lasa be asa noho ny tena nanampy.
Taorian'ny volana roa nisedra sehatra samihafa, vao avy namindra ny tetikasanay rehetra izahay Brightpod. Toa sahirana tokoa ireo olona ao amin'ny Brightpod hanome sehatra fitantanana tetik'asa izay natokana ho an'ireo masoivoho (saingy azon'ny rehetra ampiasaina). Ireo fiasa izay nenjehinay dia mety tsy dia zava-dehibe amin'ny orinasanao, fa ny nandresy anay dia ny fandresena telo: workflows (miaraka amin'ny kalandrie fanontana), asa miverimberina, ary Fampidirana Dropbox / Google Drive!
Tsy natao ho an'ny tetikasa ny sehatra, azonao atao ihany koa ny mitantana, miara-miasa ary manomana atiny havoaka amin'ny Brightpod.
Jereo ny Pods anao
Jereo ny hetsika ao amin'ny Pods anao
Tantano sy tendreo ny asanao
Ataovy lohalaharana ny lahasa
Jereo ny laharam-pahamehanao
Jereo ny Kalandrie Fanontana nataonao
Ifanakalozy hevitra ary hiaraha-miasa
Archive Pods taloha
Brightpod koa dia mora vidy, manomboka amin'ny $ 19 isam-bolana ho an'ny 10 pod sy mpampiasa 6!
Tags: pms masoivohobrightpodpmsrindrambaiko fitantanana tetikasa
FlockTag: rafitra tsy fivadihana manerantany sy fifanarahana mahira-tsaina
1 Okt 2013 amin'ny 12:17 PM
Misaotra Doug! Glad Brightpod dia manaporofo fa fitaovana sarobidy ho an'ny ekipanao. Misaotra tamin'ny fanoratana 🙂
Mar 26, 2014 amin'ny 6: 34 AM
Toa fitaovana tsara. Azo antoka fa hanandrana an'ity aho fa androany dia mampiasa proofhub aho. Ity no fitaovana mora indrindra nataoko.